Su’aalo ka badan jawaabaha la hayo oo ka dhashay dhismihii Garoonka Buule Burde ee la burburiyey + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Su’aalo ka badan jawaabaha la hayo oo ka dhashay dhismihii Garoonka Buule...
Su’aalo ka badan jawaabaha la hayo oo ka dhashay dhismihii Garoonka Buule Burde ee la burburiyey + Sawirro
SU’AALAHA TAAGAN? Waxaa Garoonka amaankiisa ku qaybsanaa oo si wadajir ah uga howlgala ciidamada DF Somalia iyo kuwa Jabuuti ee AMISOM, haddaba sidee ayay kusoo galeen kooxda Shabaabku meesha?
Tan kale, sida ay sheegeen SONNA meesha dagaal kuma qabsan Shabaabku ee dhismaha unbay burburiyeen taasoo ka dhigan in dhismaha oo aan awalba xoogganayn la miineeyey, haddaba yaa arrintaa sahley? Halkee jireen ciidankii Garoonku? Sidee sidaa ugu fududaan kartaa in la qarxiyo dhisme ku dhex yaalla garoon la doonayo in ay dayuurado kusoo degaan?
Ciidamada Jabuuti ee halkaa jooga ayaa lagu eedeeyaa inay umadda iska dhex galeen oo ay gabdho guursi iwm ku mashquuleen halkii ay u dhaqmi lahaayeen sidii ciidan xirfadleey ah, sidee taasi uga tarjumaysaa nabad ilaalin ay malaayiin doollari ku baxdo marka la eego xaaladda amaan ee xasaasiga ah ee taagan? Aaway se kuwii Somalia ee heer gobol iyo heer federaal?
Previous articleMasar oo caqli ay dad badani la yaabban yihiin kula dhaqanta Falastiiniyiinta Marinka Gaza (Akhri yaabkan)
Next articleMa taqaannaa halka ay iskaga maqaam yihiin Somaliland & kooxda Sheriff Tiraspol ee ka qaybgeleysa CL